OK GOOGLE NA KỌMPUTA - NETWORK NA INTANETI - 2019
Ok google na kọmputa
Ị maara na onye ọrụ mgbasa ozi mgbasa ozi mgbasa ozi ebe niile bụ Google Okpu ugbu a na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ, ọ bụghị naanị ekwentị gam akporo? Ọ bụrụ na ọ bụghị, n'okpuru ebe a bụ nkọwa nke otu ị nwere ike isi melite Google na komputa gị n'ime nanị nkeji.
Site na ụzọ, ọ bụrụ na ị na-achọ ebe ị ga-esi budata Google dị mma, azịza ya dị mfe - ọ bụrụ na ị wụnyela Google Chrome, ọ dịghị mkpa ka ị budata ihe ọ bụla, ma ọ bụrụ na ọ bụghị, dị na nbudata ihe nchọgharị a site na website chrome.google.com.
Mmelite (October 2015): Google wepụrụ "Google Ok" site na ihe nchọgharị Chrome, dịka ozi gbasara ndị mmadụ si kwuo, ihe kpatara nke a bụ ntakịrị iji ọrụ ahụ. Ya mere, na nsụgharị ọhụrụ nke ihe nchọgharị ahụ ime ihe na-esonụ agaghị arụ ọrụ. Ọ na-arụ ọrụ na ndị okenye, ọ bụrụ na ị na-ewere ha ebe, amaghị m, ekwesighi ikwenye.
Ok OK Kwado
Iji mee ka ọrụ Google Ok dị na Google Chrome - gaa na ntọala ihe nchọgharị gị, pịa "Gosi nhazi dị elu," wee lelee igbe "Kwado ọchụchọ olu na iwu" OK, Google. "Ọ bụrụ na enweghị ihe dị otú ahụ, jide n'aka na Ị nwere ụdị ọhụrụ nke ihe nchọgharị ahụ awụnyere, ọ bụrụ na ọ bụghị, gaa na ntọala ahụ, họrọ "Banyere Google Chrome nchọgharị" ọ ga-elele ma budata mbipute ọhụrụ ya n'onwe ya.
Emeela, ugbu a ọrụ a ga-arụ ọrụ, ọ bụrụhaala na igwe okwu gị na-arụ ọrụ, ọ na-arụ ọrụ dị ka ngwaọrụ ndekọ na ndabara na Windows na ị nwere njikọ Ịntanetị.
N'otu oge ahụ, i nwere ike ịsị: "Google dị mma" naanị na ibe ọchụchọ ma ọ bụ na nsonaazụ ọchụchọ Google - nchọgharị nke na-aga n'ihu na ibe ndị ọzọ anaghị anabata iwu.
Google ghọtara ọtụtụ iwu na Russian, n'ụzọ zuru oke (e jiri ya tụnyere ihe dị n'afọ gara aga) ghọtara okwu Russian, ma n'agbanyeghị ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke iwu, usoro ha ka dị oke. Ọ na - eme na ọ bụrụ na ịtọọ otu iwu ahụ n'asụsụ Bekee, ị ga - enweta azịza ziri ezi, ọ bụkwa na Russian naanị nsonaazụ ọchụchọ. (Site n'ụzọ, otu n'ime ihe ndị mebiri m n'oge na-adịbeghị anya: onye nnyeaka a "site na ntị" ghọtara asụsụ m na-ekwu na-enweghị ihe mgbakwunye ọzọ. M gbalịrị Rọshịa, Bekee na German, ma ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nke ikpeazụ).
Ụfọdụ ihe atụ nke iwu olu bụ ezigbo Google maka kọmputa (ọrụ maka ịmepụta ngwa site na olu, izipu ozi SMS, itinye ncheta kalenda, wdg.) Agbakwunyere na ekwentị:
Oge ole (site na ndabara, oge ugbu a na-aza site na ọnọdụ, ị nwere ike itinye obodo ọzọ na arịrịọ ahụ).
Kedu ihe ihu igwe dị na ...
Esi esi n'aka m gaa ma ọ bụ site na isi dị otú ahụ na ndị dị otú ahụ.
Gosi foto + nkọwa, gosi vidiyo + nkọwa.
Onye bụ na aha bụ aha, okwu, na ihe yiri ya.
Ego ole ka ha ruru 1000 dollar.
Gaa na saịtị ahụ na aha saịtị ahụ.
Ndi otu a ekwesighi ikwuputa dika edere. Ọzọkwa, enweghị m ike inye ndepụta zuru ezu - M na-anwale ekwentị n'onwe m, mgbe enweghi m ihe ọ bụla m ga-eme, m na-ahụkwa na a na-enweta azịza na ọnụ ọgụgụ dịgasị iche nke arịrịọ dị iche iche (ya bụ, ha na-agbakwunye oge). Ọ bụrụ na enwere azịza, ha agaghị egosi gị ihe ọ rụpụtara, ma ha ga-ekwupụta ya na olu. Ma ọ bụrụ na ọ nweghị azịza, mgbe ahụ, ị ​​ga-ahụ nsonaazụ ọchụchọ maka okwu ndị ị kwuru. N'ozuzu, ana m akwado itinye Google OK ma gbalịa, ọ dịkarịa ala ọ nwere ike ịmasị.
Ma enwebeghị m uru ọ bụla site na ohere ndị dị otú ahụ, nanị ihe ntụgharị ndị yiri ka ọ bụ mmasị bụ mgbe m rịọrọ maka nri dị ka "igwe igwe ole na ole na otu iko" ka ha wee ghara imetụ aka na ngwaọrụ ọ bụghị aka mgbe niile. Ọfọn, inye ụzọ n'ime ụgbọ ala.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị na-eme ihe nlereanya m, ma ejighị ya na "Google Ok" - ejirila m olu olu mee ihe n'ime akwụkwọ ekwentị android (nke nwere ike ịrụ ọrụ na offline) iji pịa ọnụọgụgụ ọ bụla nke otu narị na nọmba.